ခရစ်တော်အပေါ်သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးခံရခြင်း | The Betrayal and Arrest of Christ | Real Conversion
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၅ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ယခုပင် ငါ့အဘကို ငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်း၊ တောင်း လျှင်ကောင်းကင်တမန် တစ်ဆယ့်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူမည်ကို၎င်း၊ သင်သည် မထင်သလော။” ( မဿဲ ၂၆း ၅၃ )
ယေရှုသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် ဆုတောင်းပဌနာပြု သောအခါ အိပ်လျက်နေသောတပည့်တော်များထံသို့လာ၍ ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
“ထကြ၊ ငါတို့သည် သွားကြကုန်အံ့။ ငါ့ကိုအပ်နှံသောသူသည် ရောက်လာပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( မဿဲ ၂၆း ၄၆ )
ထို့နောက်၊ မှောင်မိုက်အားဖြင့် အရေအတွက်အားဖြင့် ၃၀၀ ခန့်သောစစ်သားတို့သည် ချဉ်း ကပ်လာကြပါသည်။
“…ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့စေလွှတ်သော မင်းလု လင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍၊ မီးအိမ်၊ မီးရှူး၊ လက်နက်တို့ကို လက်စွဲ လျက်လာကြ၏။” ( ယောဟန် ၁၈း ၃ )
ယုဒသည် သူတို့အား ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည်
“ထိုအရပ်သို့ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်သွားမြဲရှိသော ကြောင့်” ( ယောဟန် ၁၈း ၂ )
ယုဒသည် ယေရှုထံသို့လာ၍ သူ့ကို နမ်းရှုံ့ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုအဘယ်သူဖြစ်သည် ကို ညွှန်ပြနေကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် အနမ်းတစ်ပွင့်အားဖြင့် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့ ပါသည်။
ယေရှုက စစ်သားများအား “အဘယ်သူကို ရှာဖွေနေကြပါသနည်း” ဟု မေးခဲ့သည်။ သူတို့က “ နာဇရက်မြို့သားယေရှု” ဟု ပြန်ဖြေကြပါသည်။ ယေရှုက “ထိုသူသည် ကျွန်ုပ်ပင် ဖြစ်သည်” ဟုဆိုလေသည်။ ထိုအခါ သူတို့သည် လန့်ဖြတ်၍ “မြေပေါ်သို့လဲကြလေသည်။” ထိုအချက်က ဘုရားအဖြစ်နှင့်သူ့တန်ခိုးကို ထင်ရှားစေလေသည်။ ထို့နောက် ယေရှုက “ငါ ဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏” ဟု ဆိုလေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ငါ့ကိုရှာလျှင် ၎င်းတို့ လမ်းဖြင့်သွားပါလေစေ” ဟုဆိုလေသည်။ ( ယောဟန် ၁၈း ၈ )
ထိုအချိန်တွင် ပေတရုသည် ချက်ချင်းထ၍ ၎င်း၏ဓါးအိမ်ထဲက ဓါးကိုထုတ်ကာ တိုက် ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ အမှောင်ထဲတွင် ဓါးကိုဝှေ့ရမ်းသဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အစေခံကျွန်၏နားရွက်ကို ခုတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ ယေရှုက “သူ့နားရွက်ကိုထိ၍ ကျန်းမာစေလေသည်။” ( လုကာ ၂၂း ၅၁ ) ထို့နောက် ယေရှုက ပေတရုအား ဤသို့ဆိုလေသည်။
“ယေရှုကလည်း သင့်ထားကို သူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့။ ထားကို ကိုင်သောသူရှိသမျှတို့သည် ထားဖြင့် ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့် မည်။ ယခုပင် ငါ့အဘကို ငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်း ကင်တမန် တစ်ဆယ့်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူမည်ကို ၎င်း၊ သင်သည် မထင်သလော။” ( မဿဲ ၂၆း ၅၂-၅၃ )
ဤကျမ်းပိုဒ်မှာ သင်ခန်းစာနှစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်သည် သူ့ကိုကယ်တင်မည့် ကောင်းကင်တမန် ထောင် ပေါင်းများစွာကို ခေါ်နိုင်ပါသည်။
ရောမစစ်သည်ကို စစ်သားပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယေရှုက သူ သည် ခမည်းတော်ဘုရားကို ခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ခဏချင်းတွင် အကူအညီ ပေးမည့်ကောင်းကင်တမန်တပ်ကို စေလွှတ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်းဆိုပါသည်။ သူသည် ဤစစ်သားများလက်မှ လွတ်မြောက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင် ဘုရားသခင်ကိုခေါ်သဖြင့် ကောင်းကင်တ မန်ပေါင်း ၇၂၀၀၀ ကျော်ကို စေလွှတ်နိုင်သည်။ ဒေါက်တာ John Gill က ထိုအရာကို “ကောင်းကင်တမန်တပါးသည် တစ်ညတွင် လူတစ်ရာကျော်၊ လူပေါင်း ငါးထောင်ကျော်ကို သတ်ဖြတ်နိုင်ကြေင်း ၂ ရာ ၁၉း ၃၅ ကို ညွှန်းဆိုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် လက်ရှိကြုံ တွေ့နေသော ဒုက္ခပြဿနာထဲက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ပေတရု၏ဓါးမလိုအပ်ပေ”ဟုဆိုပါ သည်။ ( ဒေါက်တာ John Gill, ဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ရှင်းလင်းချက်၊ The Baptist Standard Bearer, ၁၉၈၉၊ အတွဲ ၁၊ စာ- ၃၄၀ )
ခရစ်တော်၏နှုတ်တော်ထွက်စကားနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များက သူသည် အခြေအနေ တစ်ခုလုံး၏စုံလင်သောအမိန့်တော်၌ ရှိနေကြောင်းကို ပြသပါသည်။ သူက “ငါဖြစ်သည်” ဟုဆိုရာတွင် စစ်သားများသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် နောက်ပြန်လဲကြပါသည်။ ပေတရုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏အစေခံ မာခ၏နားကို ခုတ်ဖြတ်လိုက်သောအခါ ခရစ် တော်က သူ့ကို ပြန်လည်၍ အနာငြိမ်းစေခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင် ခရစ်တော်သည် ပေတရုအား သူသာလျှင် အလိုရှိလျှင် ဘုရားသခင်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကောင်းကင်တမန်တို့ ကို စေလွှတ်၍ ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆိုသွားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ လွှတ်မြောက်ခွင့်ရရန် သူသည် ဆုမတောင်းခဲ့ပေ။
ဆုတောင်းရာဥယျာဉ်တွင် ယေရှု၏လက်တော်ကို တုတ်နှောင်ခဲ့ ကြ၊
အရှက်တရားရှိရာ လမ်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြ။
ကယ်တင်ရှင်ကို တံထွေးဖြင့် ထွေးကြ၊ အပြစ်မှ လွတ်မြောက်စရာ၊
“ကားစင်တင်ကြ၊ သူကိုအပြစ်တင်ကြ” ဟုဆိုကြသည်။
လောကကိုဖျက်ဆီးပြီး သူ့ကို လွတ်မြောက်စေရန်။
သူသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကောင်းကင်တမန်များခေါ်နိုင်၊
သို့သော သူတစ်ဦးတည်းအသေခံ၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တွက်လေ။
( “ထောင်ပေါင်းများစွာကောင်းကင်တမန်” Ray Overholt, ၁၉၅၉ ).
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်သို့ စိတ်နှလုံးပါလျက်သွား ခဲ့သည်။
ယေရှုသည် ဥယျာဉ်ထဲ၌ အံ့ဩမင်သက်ဖွယ်ရာ ခရစ်တော်သည် အဖမ်းခံရမည်ဟု ဘယ်တော့မှ မတွေးမိပါ။ သူသည် ထိုညအဖမ်းမခံရမှီ အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို သိခဲ့ပါ သည်။
တပည့်တော်များအား ယေရုရှလင်မြို့သို့ မခေါ်သွားမှီနေ့ရက်များတွင် အဘယ်သို့ဖြစ် လာမည်ကို သူတို့အား မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလဖြစ်သည့် ယေရှုအဖမ်းမခံရမှီအချိန်က မိန့်တော်မူသောအရာများကို ရှင်လုကာက မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တကျိပ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊ ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ ပရောဖက် များရေးမှတ်သမျှသည် လူသား၌ ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုး သားတို့လက်သို့ အပ်နှံခြင်း၊ ပြက်ယယ်ပြုခြင်း၊ ညဉ်းဆဲခြင်း၊ တံ ထွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် လူသားကို ရိုက် ပုတ်၍သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက် လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( လုကာ ၁၈း ၃၁- ၃၃ )
သူသည် ယေရုရှလင်သို့သွားသောအခါ သူ၌ အဘယ်သို့ဖြစ်လာမည်ကို အတိအကျ သိခဲ့သည်ကို ဤအရာက ညွှန်ပြနေသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် သွားခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရန်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံရန် စိတ်ဆန္ဒအလျောက်သွားခဲ့ပါ သည်။
ဤအချိန်နာရီနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကြွလာကြောင်းကို ယေရှုက နှစ်ကြိမ်တိုင် တိုင် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် တပည့်တော်တို့အား ဤသို့မိန့်ဆိုသည်။
“ငါသည် ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏။ အဘယ်သို့ ငါလျှောက်ရမည် နည်း။ ထိုအချိန်မှ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူပါ၊ အဘဟု လျှောက်ရမည်လော။ အကြောင်းရှိ၍သာ ထိုအချိန်သို့ရောက်လာ ပြီ။” ( ယောဟန် ၁၂း ၂၇ )
တဖန် ရောမဧကရာဇ် ပုတ္တပိလတ်ရှေ့၌ ရပ်နေသည့်အချိန်၌လည်း “သမ္မာတရားဘက်၌ သက်သေခံခြင်းငှါ ငါသည် မွေးဘွားခြင်းကိုခံ၍ ဤလောကသို့ကြွလာပြီ” ( ယော ၁၈း ၃၇ ) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ယေရှုက သူမွေးဖွါးလာရသည့်အကြောင်းရင်းကို သိသည်ဖြစ်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆီ သို့ စစ်သားများနှင့်အတူ စိတ်ပါလျက် လိုက်သွားရခြင်းဖြစ်လေသည်။ သူမွေးလာရသည့်အ ကြောင်းရင်းမှာ လူ့အပြစ်ဒဏ်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ပေးဆပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့အား ဖမ်းချုပ်ခြင်းသည် မတော်တဆ၊ သို့မဟုတ် မှားယွင်းမှုလည်းမဟုတ်ပါ။ သူ့အသက်တာ၌ ထို အရာများဖြစ်လာမည်ကို သိခဲ့သည်။ “အကြောင်းရှိ၍သာ ထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီ။” ( ယော ၁၂း ၂၇ ) “ဤအကြောင်းကြောင့် မွေးဘွားခြင်းကိုခံ၍။” ( ယော ၁၈း ၃၇ )
ခရစ်တော်သည် စစ်သားများနှင့်အတူ ဆန္ဒအလျောက်သွားခဲ့သည်။ မျက်နှာပေါ်တွင် တံထွေး ထွေးခြင်းခံလျက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ပါသည်။ သူ့ဘဝအသက်တာ တွင် ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ကို နာခံလျက်ရှိပါသည်။ ခရစ်တော်သည်
“မိမိအသရေကိုစွန့်၍ အစေခံကျွန်၏သဏ္ဍာန်ကိုယူဆောင်လျက်၊ လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ ထိုသို့ လူ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်၊ အသေခံခြင်းသာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေကျွန်ခံ၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချတော်မူ၏။” ( ဖိ ၂း ၇-၈ )
“ဘုရားသခင်သားတော်မှန်သော်လည်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအား ဖြင့် နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကို သင်တော်မူ၏။ ထိုသို့ စုံ လင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှ ယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့ အား ထာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၍၊” ( ဟေဗြဲ ၅း ၈- ၉ )
စစ်သားများသည် ယေရှုကို ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ချိန်တွင် အကာအကွယ်မယူဘဲ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဝန်ခံကာ သူတို့နှင့်တိတ်တဆိတ်လိုက်သွားခဲ့သည်။
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံ၍ နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။ အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသူငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကို ဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ်သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေ သကဲ့သို့၊ သူသည် နှုတ်ကို မဖွင့်ဘဲနေ၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၇ )
ဦးခေါင်းတော်မှာ ဆူးရစ်သရဖူကို တင်ဆောင်းစေခဲ့ကြ၊
သူတို့သည်ရယ်မောလျက်၊ “ရှင်ဘုရင်ကိုကြည့်ရှုကြ” ဟုဆိုကြ။
သူကို နာကျင်စွာရိုက်လျက် ကြိမ်ဆဲကြ၊
ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ဆန္ဒအလျောက် ဘုရားသခင်ကိုနာခံခြင်းဖြင့် သွား ခဲ့ပါသည်။ “သူသည် အသေခံမည့်သိုးသူငယ်ကဲ့သို့ ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူခဲ့သည်။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၇ )
ခရစ်တော်သည် ထိုညတွင် “အသေခံသောသိုးသူငယ်အဖြစ်” စစ်သားများနှင့်လိုက် သွားခြင်းမရှိလျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ သူသည် ကောင်းကင်တမန်တပ်ကို အ ဘယ့်ကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှလွတ်မြောက်ရန် မခေါ်သနည်း။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်၌ မည်သို့ဖြစ် ပျက်မည်နည်း။
ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အပြစ်အခပေးဆပ်မည့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ အစားထိုးမည့်သူမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကိုယ်စား အ သေခံမည့်သူမရှိ။ ထိုအကြောင်းအရာက ကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ရှိစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငရဲထဲ၌ ထာဝရကာလတိုင်အောင် မှောင်မိုက်ထဲ၌ မိမိအပြစ်အ တွက်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်၊ “အသေခံမည့်သိုးသူငယ်အဖြစ်” ခရစ်တော်သည် ထိုစစ်သားများနှင့် အတူမရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဘုရားသခင်ကြား၌ အာမခံရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးမည့်သူမရှိဘဲ နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းတွင် ဘုရားသ ခင်၏မျက်နှာတော်ကို ရင်ဆိုင်ရကြမည်။
“ဘုရားသခင် တဆူတည်းရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့၏စပ် ကြားမှာ လူဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော အာမခံတပါးရှိ ၏။” ( ၁ တိ ၂း ၅ )
ဖမ်းဆီးခံရချိန်၌ ခရစ်တော်သည် စစ်သားများနှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သွားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၌ အာမခံရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ ရန်ငြိုးရန်စရှိသောလူနှစ်စု ကြား၌ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးမည့်သူတစ်ဦးဦးရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသ ခင်နှင့်အပြစ်သားကြားတွင် ငြိမ်ချမ်းရေးကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော တစ်ဦးတည်းသော အာမ ခံဖြစ်ပါသည်။ သားတော်ဘုရားသာလျှင် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်အပြစ်ရှိသောလူတို့ကို အတူ တကွပေါင်းစည်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံရန် လိုက်မ သွားလျှင် သန့်ရှင်းသောဘုရားနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောဆက်နွယ်မှုကို အဘယ်သူမျှ ယူဆောင်ပေး နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် စစ်သားများနှင့်အတူ “အသေခံမည့်သိုးသူငယ်အ ဖြစ်” မသွားခဲ့လျှင်၊ ထာဝရအသက်ကို ဝင်စားရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက လူ အသိဆုံးကျမ်းပိုဒ်မှာ အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
“ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရား သခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့် တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” ( ယော ၃း ၁၆ )
ခရစ်တော်သည် အဖမ်းခံရစဉ်က စစ်သားများနှင့်အတူ လိုက်သွားခြင်းမရှိလျှင် ယောဟန် ၃း ၁၆ သည် မှန်ကန်ခြင်းရှိလာမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်လည်း ထာဝရအသက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရရန် မျှော်လင့်ချက်ရှိမည်မဟုတ်။
စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့် ခရစ်တော်သည် “သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရမမည့်သိုးသူငယ်ကဲ့သို့” စစ်သားများနှင့်လိုက်ခဲ့လျှင် နောက်တစ်ရက်၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း သောအသွေးတော်သည် အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် သင့်အတွက် အကျိုးရှိမည်မဟုတ်။ သူ သည် ဘုရားသခင်ကို နာခံခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့လျှင် သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ရှိ အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းလည်း ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ သို့ ရာတွင် ခရစ်တော်သည် ထိုညတွင် သင့်အပြစ်ကိုယ်စားအသေခံရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ သွားခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင် တမန်တော် ပေါလုက သတ္တိရှိရှိဖြင့် ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့် အဘိုးကိုမပေးဘဲ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏။… ထိုခရစ်တော်ကို အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ခန့်ထား တော်မူပြီ။” ( ရောမ ၃း ၂၄- ၂၅ )
( “အသွေးနှင့်ပြည့်သောတွင်း” William Cowper, ၁၇၃၁-၁၈၀၀ ).
သင်သည် ခရစ်တော်ထံသို့လာ၍ ကိုးစားယုံကြည်မည်လော။ သူသည် သင့်အပြစ်အ ခကိုပေးတော်မူမည်။ သူသည် သင့်အား ဘုရားသခင်နှင့်ရန်ငြိမ်းခြင်းကိုပြုပေးမည့်သူဖြစ်ပါ သည်။ သင်သည် ထာဝရအသက်ကိုလည်းပေးမူမည်။ သင့်အပြစ်ကို ဘုရားသခင်၏မှတ်တမ်း ထဲကနေ ပထုတ်လိုက်ပေမည်။ ထို့အပြစ် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ထာဝရဆေး ကြောသန့်စင်ပေးပါမည်။
ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုနာခံပြီး ထိုစစ်သားများက ဥယျာဉ်၌ ဖမ်းဆီး ကြချိန်တွင် လိုက်၍သွားသောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ သူသည် နှိမ့်ချခြင်း၊ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ ကာတိုင်တော်သို့ သူတို့နှင့် လိုက်သွားခြင်းမရှိလျှင် သူ၏မွန်မြတ်လှသောအမှုကို မလုပ် ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။
သူသည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့သည်၊ သနားခြင်းကရုဏာအတွက် အော်ဟစ်ခြင်းမဟုတ်။
“အမှုပြီးပြီ” သူလေ အော်ဟစ်ခဲ့၊
သူသည် အသေခံရန် မိမိကိုယ်ပေး၊
ယခုတွင် ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်ကို ယုံ ကြည်ကိုးစားလိုခြင်းရှိမရှိကို မေးမြန်းလိုပါ၏။ သင်သည် ယခုထိ သူ့အား ဆီးတားလျက်ရှိပါ သည်။ သင်သည် ကယ်တင်ရှင်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆန့်ကျင်လျက် စိတ်နှလုံးခိုင်မာစေ လျက်ရှိပါသည်။ ယနေ့ညတွင် သူ့ထံပါးသိုး ဆည်းကပ်ပါမည်လော။
သူ့ကို ပျက်ရယ်ပြုစော်ကားသည့် ရိုင်းစိုင်းသောစစ်သားမဖြစ်ပါစေနှင့်။ သူ့အားငြင်း ပယ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကဲ့သို့ ဝါကြွားပြီး စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသူ၊ မျက်နှာကို တံထွေး ဖြင့်ထွေး၍ ကိုးစားရန်ငြင်းပယ်သော ဖာရိရှဲကဲ့သို့ မဖြစ်ပါစေနှင့်။ သူတို့နှင့်လုံးဝမတူရန် တောင်းဆိုလိုပါသည်။ သင်သည် ရှည်လျားသောအချိန်ကာလ၌ သူတို့နှင့်တူခဲ့ပြီးပြီ။ သင့်စိတ် နှလုံးကို ရိုးစင်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုကိုပေးသနားပါ။ သင်သည် “ဤလောကအပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်” တည်းဟူသော ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားမည် လော။ ( ယောဟန် ၁း ၂၉ )
“ထောင်ပေါင်းများစွာသောကောင်းကင်တမန်"၊ (Ray Overholt, ၁၉၅၉ ရေးစပ်ပါ သည်။ )
( မဿဲ ၂၆း ၄၆၊ ယော ၁၈း ၃၊ ၂၊ ၈၊ လုကာ ၂၂း ၅၁ )
၁။ ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်သည် သူ့ကိုကယ်တင်မည့် ကောင်းကင်တမန် ထောင် ပေါင်းများစွာကို ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ၄ ရာ ၁၉း ၃၅။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်သို့ စိတ်နှလုံးပါလျက် သွားခဲ့သည်။ လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၃၊ ယော ၁၂း ၂၇၊ ၁၈း ၃၇၊ ဖိလိ ၂း ၇-၈၊ ဟေဗြဲ ၅း ၈-၉၊ ဟေရှာ ၅၃း ၇၊ ၁ တိ ၂း ၅၊ ယော ၃း ၁၆၊ ရော မ ၃း ၂၄- ၂၅၊ ယော ၁း ၂၉။